युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा बार्सिलोनाको विजयी सुरुवात
Wednesday, 13 Sep, 2017 9:08 AM
ईटालीयन च्याम्पियन युभेन्टसलाई ३–० ले हराउँदै बार्सिलोनाले नयाँ सिजनको युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ ।
गएराति आफ्नै मैदानमा भएको समुह चरणको पहिलो खेलमा बार्सिलोनालाई विजयी गराउन लियोनल मेस्सीले दुई तथा इभाँ राकिटिचले एक गोल गरे । च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत समुह डि कै अर्को खेलमा पोर्चुगलको स्पोर्टिङ लिस्बनले ग्रीसको ओलम्पियाकोसलाई ३–२ ले पराजित भयो ।
त्यस्तै समुह ए को खेलमा इङ्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाईटेडले स्विट्जरल्याण्डको एफ.सी. बाजललाई ३–० ले हरायो । यसै समूहको अर्को खेलमा रुसको सि.एस.के.ए मस्कोलाई पोर्चुगलको बेनिफिकाले उसैको मैदानमा २–१ ले हरायो ।
च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखले बेल्जियमको एण्डरलेच्टलाई ३–० ले हराउँदा फ्रान्सको पेरिस सेन्ट जर्मेन पि.एस.जी.ले स्कटल्याण्डको सेल्टिकलाई ५–० ले पराजित ग¥यो । इङ्लिस च्याम्पियन चेल्सीले समुह सि को खेलमा काजखस्तानको एफके कारावागलाई ६–० गोलको फराकिलो अन्तरले हरायो ।
यसै समुहको अर्को खेलमा ईटालीको ए.एस. रोमाले स्पेनको एथ्लेटिको मड्रिडसँग गोलरहित बराबरी खेल्यो । च्याम्पियन्स लिग फुटबलअन्तर्गत समूह ई देखि एचसम्मका बाँकी आठ खेल आज राती हुनेछन् ।